Beesha Bariga Burco Meel Baa Lagu Ogyahay Oo Mabda’eedu Yahay Hudheelna Ma Qaado Beesha Ee Xirsi Hayska Caga-dhigto | Marsa News
Beesha Bariga Burco Meel Baa Lagu Ogyahay Oo Mabda’eedu Yahay Hudheelna Ma Qaado Beesha Ee Xirsi Hayska Caga-dhigto
September 22, 2017 - Written by editor marsan
Hargaisa:(Marsanews) Afhayeenka Xisbiga Kulmiye Laantiisa Holland Siyaasi Axmed Jaamac Faarax oo ka mid ah Siyaasiyiinta golaha Dhexe ee Xisbiga kulmiue ugu jira beesha Bariga Burco ayaa cambaarayn ujeediyay Hogaamiyaha Xisbiga Wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan talaabadii dhalinyarada uu ku soo tubay warbaahinta kuna sifeeyay magaca beesha bariga burco ee ku biiray xisbiga Wadani , oo uu ku tilmaamay inay xor u ahaayeen halka ay ku biirayaan, balse ay qadaf ahayd adeegsiga magaca beeshu, isagoo intaa ku daray, in beelaha bariga burco aqlabiyadooda lagu ogaa xisbiga Kulmiye, islamarkaana aanay jirin talo ay beeshu ku go’aansatay in Kulmiye laga baxo Wadnina-na lagu biro.
Waxa kale oo uu Siyaasi Axmed Jaamac Faarax uga digay xubnaha Xisbiga Wadani kaga jira beelaha HABAR Jeclo inaanay Ku qudhaaban codka beesha oo ay Isbixiyaan dhinaca kalena axsaabta siyaasada si weyn ugu dhaliilay inaanay makasta iyo caruuraha ay gidaarada ka kaxaystaan ee kusoo biiraysa Shaanbad uga dhigan magacyada beelaha ay kasoo jeedaan.
Siyaasi Axmed Jaamac Faarax , oo Shabakada Taxanenews Xalay khadka tilifoonka xogwaraysi aanu kula yeelanay aragtidiisa ku wajahan xafladaha iyo Xafiisyada todobaadkan Hogaamiye Xirsi uu u qabtay Dhalin yarada kasoo jeeda beesha habar Jeclo
Siyaasi Axmed Jaamac Faarax oo ka hadlaya arrinkaasna waxa uu hadalkiisa ku bilaabay “magaca beesha habar Jeclo in loo adeegsado axsaabta ku biiristeeda waa kalmad xaaraana, waanan cambaaraynayaa, mabada’ guud ee beesha habar Jecla-na waa meel oo ujeedo ayay leedahay danta beesha iyo ujeeda shaqsiguna waa kala gaar ismana dabooli karaan, sidaa darteeda qolada magaca beesha habar Jeclo sheegatay waxaan leeyahay ama Xisrsi Jaad ha uqaado ama meel kale ka yimaada oo afkaarta aad doontaan aaminsanaada, balse magaca beesha ha u adeegsanina siyaasad, magaca guud ee beesha waxa ku hadli kara ciday u igmatay waanan cambaaraynayaa cid kastoo magaca adeegsata.
Beesha habar Jeclo maaha shinni kolba meeshay doonto iskaga guurta beeshu waa mid dhaqan taariikh soo jireena leh oo talo iyo mabada’ guud leh sidaa darteed xisbigay doonaan ha ku biiraane qofku isagaa u xor ah laakiinse waa meel kadhaca sheegashada magaca beelaha in axsaabta siyaasadu dhiiri galiyaan, adeegsiga magaca beeluhuna waa xadgudub, beesha habar Jeclo-na wax hudheel qaado way ka weyn tahay talo ay iskugu timid oo halkee aynu u guurnana ma jirto”.
S : Waxa lagu sheegay in ololaha dhalinyarada ee beesha ee ay ku jihaysan tahay xubnaha Golaha Wasiirada kaga jira iyo siyaasiyiinta Wadani oo ay ku loolamayaan kalsoonida beesha siddii ay u kala kasban lahaayeen, arrimahaa maxaad ka leedahay?
J :labadoodaa midkoodna kalsoonida beesha ma heli karo, qofku haduu is yidhaahdo adigu tuurta ku qaado oo wax ha kuu goyso, waa wax aan suuro gal noqon Karin, qofka aqoontiisa, kartidiisa, wadaniyadiisa, waxaasaa wax gooya laakiin tuurtaan magac beeleed ku qaadanayaa si aan wax ugu helo wax siyaasada dibada ka ah ayaan u arkaa.
S : beesha HabarJeclo waxay taageero weyn siin jirtay Kulmiye sida doorashadii Madaxtooyada dalka ka dhacday, waxana lagu tilmaamaa Tiirarka Xisbiga Kulmiye Kuwa ugu waawayn , intan dambena waxay mucaaridku sheegeen in beeshu Wadani u soo janjeedhsatay,arrimahaasi ma wax baa iska bedelay?
J : horta Xafladaha Hogaamiye Xirsi Iyo Xisbiga Wadani burco kawadaan , hogaan dhaqameedkii, xildhibaanadii, odayaashii, midkoodna may joogin xafladaasi loo qabtay dhalinyarada, beeluhuna talo hayeen hogaamisa ayay leeyihiin, Habarjecla-na aqlabiyadeeda meel baa lagu ogaa, Vote maanta dhacayna muu jirin, ninkii iskaga tagayoow adigay ku jirtaa laakiin Habarjeclo baa halkaa ka tagtay oo halkaa ku biirtay anigu ma ogi, beeshuna mabda’eedii hore ayay joogtaa.
S : halka lagu ogaa beesha HabarJeclo ee aad sheegaysaa waa halkee?
J : majooratiga Habarjeclo Kulmiye buu ahaa, iyadaana markii hore Madaxweynaha soo saartay, markii dambena Ayadaa Muuse Biixi Sharaxatay , iyadoo maanta majooratigii shacbiga Somaliland ay Kulmiye ku soo qulqulayaan inay maanta dadka daba maraan kumaan wadin laakiinse ninka Wadani iyo xisbiyo kale joogaa ha qabo kalsoonidiisa balse beesha magaceeda yuu sheeganin.
S : xubnaha Golaha Wasiirada beesha ayaa lagu eedeeyaa inay iyagu mashruuc ka dhigataan arrimaha beesha, arrinkaasi maxaa ka jira?
J : wasiirada waxad moodaa inay had iyo jeer xarakaad ka dhigtaan beesha oo marka ay maqlaan meel baa shir lagu qabanayaa ay gucleeyaan oo ay u yaacaan, beeshuna xilka umay dhiibane Madaxweynaha ayaa magacaabay, beesha magaceeda ayay ku joogaan iyagu hawlaha yimaada buunbuuninta ha ka ilaaliyaan, waxad moodaa inay iyagu buunbuuninayaane.
S : waxa la sheegay in dhalinyaradan ku biirtay Wadani, ay wasiirada beeshu la shireen balse ay qancin kari waayeen, arrinkaasi maxaad ka ogtahay?
J : way la shireen baa la igu yidhi laakiinse waxay ka wada hadleen xaqiiqdii ma hayo.
S : waxa la sheegay in xubnaha wasiirada ay su’aal ka weydiiyeen balanqaadyo hore oo xukuumaddu u sameysay beesha xiligii doorashada oo aanay waxba ka fulin, wasiiraduna jawaab shaafi ah ka siin waayeen?
J : Somaliland wax badan ayaa ka qabyo ah balan qaadyo aan suuro gelina way jiraan, haddii wasiiraada arrinkeeda wax laga weydiiyana waxay ahayd inay jawaab shaafi ah ka siiyaan in la suuro gelinayo, qofna lama odhan karo xisbigaa ma geli kartid ee qofku isagaa u xor ah halkuu afkaartiisa ku tagayo.
S : Hogaamiye Xirsi Cali Xaaji Xasan oo Wadani ka tirsan ayaa lagu tilmaamaa in xubnaha beesha ugu jira xukuumadda uu kaga guuleystay kalsoonida iyo taageerada beesha, aqlabiyadeediina u jiheeyay Wadani. Arrintaa maxaad ka odhan lahayd?
J : run bay tagi doontaa maalinta ay doorashadu dhacayso ee codka la bixinayo ayuunbay xaaladu kala cadaan doontaa, siyaasi isagu meel dantiisa moodayna maslaxada beesha kama sii turjumi karo, xisbiyadana loogama baahna in bulshada ay qabyaalad kaga dhex ololeeyaan, waa inay barnaamij siyaasadeed ku kala kasbadaan laakiin reer hebeloow iyo tolaayeey mabda’a siyaasadeed maaha.